7 Fomba tsotra ho Azy raiki-pitia
Ny fitiavana & Firaisana ara-nofo
amin'ny Jennifer Finney
Last nohavaozina: Mey. 15 2019 | 2 min namaky
Noho izany dia efa lavo loha-ny-Handimby ho an'ny olona, izao izay? Ny ambany dingana tsotra dia hanampy hanao azy ho lavo lalina kokoa noho ianao.
Simple Dingana #1: Mitsikia foana
Namirapiratra ny tena tsiky matetika araka izay azo atao mijery mahatonga anao mora hatonina. Na nahazo loka io tsiky ny anareo dia mikendry ny lehilahy, na ny zava-nitranga teo, mitsiky dia hanampy mba hahatonga anao kosa sambatra kokoa izay hahatonga ny lehilahy te-handany fotoana bebe kokoa miaraka aminao.
Soso-kevitra: Rehefa manao masony amin'ny fitiavana, mitsiky mamela azy io tsikelikely Niely nanerana ny tavanao. Raha vao hitany, sendrasendra fotsiny nanambany. Izany dia hahatonga anao tsy hay tohaina.
Simple Dingana #2: Asehoy ny tsara indrindra ianao
Miova ny olona, aoka ihany ny olona dia fomba fahandro ho an'ny loza. Isika rehetra dia manana toetra mahagaga ka nahoana no tsy manasongadina ireo? Tsy izany ihany no hirehareha ny hatoky fa dia hahatonga anao fa manintona kokoa ny olona.
Soso-kevitra: Miezaka fotsiny mba hijery tsara. Ataovy madio ny volon-dohany sy ny styled, mahita ny fanaovan-tsonia fofony, fofonaina foana vaovao, anaovan'ireo lokomena, ary ho azo antoka ny fitafiana madio sady mifanaraka.
Simple Dingana #3: Aoka ho Zava-mahagaga
Mba hiseho tsy takatry ny saina sy tsy hay tohaina, tianao ny hiala aminao ny olona manontany tena momba anao.
Soso-kevitra: Ary raha angatahany momba ny tantara, lazao aminy ihany tsipiriany vitsivitsy avy eo hoe mitsiky “ny sisa hovonjeko ho an'ny fotoana iray hafa”. Koa, miandry azy mba hifandray anao. Rehefa manao, Ataovy azo antoka fa tsy hamaly avy hatrany. Tsy vitan'ny no ho nieritreritra ianao fotoana iray manontolo fa hoe tena miavaka koa fa manana ny zavatra hafa mba hanao azy noho ny dote andro rehetra.
Simple Dingana #4: Avelao Azy mandrakariva Te More
Nandao ny olona te kokoa tsara foana hevitra. Raha tapitra ny resaka raha vao mahazo stale sy mankaleo, dia avy hatrany dia miandrandra anao amin'ny manaraka lahateny roa.
Soso-kevitra: Na ny SMS, emailing, na endrika-tava resaka intsony ny resaka alohan'ny fahanginana mitranga. Koa, ho azo antoka ny tsy obsessively hifandray azy. Raha manao ny tenanao koa misy, dia hiseho koa pushy.
Simple Dingana #5: Amin'ny fomba malefaka Flirt
Nandatsaka saro-takarina, FIJERY jejojejo hamantatra izany no hanampy azy hahazo ny fifandraisana matoky fa roa fa mitombo.
Soso-kevitra: Tratra mijery azy manerana ny efitrano, teny foana ny vatanao misokatra amin'ny angling ny vatanao mankany aminy, ary rehefa mipoitra ny fahafahana hananihany azy. Koa, hamela ny tenanao mba natahotra be twirl ny volo, na manaikitra ny molotra toy izay mampiseho azy fa ianao tia azy.
Simple Dingana #6: Fa mihevitra Towards Azy
Mampiseho fa jereo ny zavatra ataony sy manampy talohan'ny manontany. Amin'ny alalan'ny fitandremana ny fihetsika kely, ny fahalalahan-tanana no sarobidy kokoa noho ny.
Soso-kevitra: Na dia eo anivon'ny tetikasa iray mankaleo na marary, mampiseho azy tianao, amin'ny fakana fotoana aminy dia milaza fa ianao no manohana sy fikarakarana.
Simple Dingana #7: Ny lafiny tsara ho Force teo amin'ny fiainany
Aoka ianao ho olona tsara eo anatrehany amin'ny mikendry ny ho tsara ny zava-misy na inona na inona, na resaka. Tena be dia be mora kokoa ny raiki-pitia amin'ny olona iray izay oharina amin'ny olona tsara izay mitaraina foana.
Soso-kevitra: Raha negativity sy nitaraina ny sasany dia OK, miezaka foana ny fiainanao tsara ka mahatsiaro ny fotoana mafana sy miara-c-.
Na dia tsy afaka ny “manao” na iza na iza mahatsiaro iray fomba, mampiseho ny maha be fitiavana positivity sy handrisika ary mandona ny fihetseham-pony amin'ny lalana marina.
Ny zavatra rehetra amin'ny olona no Tokony Hanalavitra ny Date Voalohany
Red enina saina ny mamantatra amin'ny The First Date
5 Antony Nahoana Pet tompony mpandresy Mampiaraka amin'ny The World
Rehefa ve ny "fotoana mety" hanao ny New fifandraisana?
11 Top Pejy Facebook ho an'ny Dating torohevitra amin'ny 2015
© Copyright 2019 Date My Pet. Nataon- amin'ny 8celerate Studio